Magaalada Kismaayo oo kaabiga lagu hayo iyo Hanjabaado masuuliyiinta Dowladda ay jeediyeen
Updated About:295 days ago 0
Wararka saaka ka imaanaya Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in Ciidamada Dowlada Soomaaliyeed ay kaabiga ku hayaan magaalada qorshahana uu yahay inay la wareegaan magaalada oo dhan.
Afhayeenka Ciidamada Dowlada Soomaaliyeed Muxumad Daahir Faarax ayaa sheegay in ciidamada dowlada maalmahaan ay howlagalo ka wadeen deegaanada hoostaga magaalada Kismaayo,dhawaana ay la wareegi doonaan sida uu shaaciyay
Afhayeenka Waxaa sidoo kale uu xusay inay soo qabsadeen deegaano dhowr ah oo ku yaala duleedka magaalada Kismaayo taasi oo sida uu sheegay u sahlaysa inay si sahlan u gaaraan magaalada Kismaayo.
Xiisadaha duulaanada xambaarsan ee ka taagan magaalada Kismaayo ayaa cabsi xoogan ku abuurtay magaalada Kismaayo Shacabka dagan,waxaana taasi ay sababtay in shacab badan ay isaga baxaan halkaasi.
Afhayeenka ciidamada dowlada Soomaaliyeed ma uusan cayimin waxtiga rasmiga ah ee ay qabsan doonaan magaalada Kismaayo laakiin wuxuu sheegay inay weeraradooda dhameystiran yihiin iyaga iyo ciidamada AMISOM iyo kuwa Raaskaambooni.
Sikastaba Ciidamada Dowlada Soomaaliyeed ayaa magaalada Kismaayo u jira meel dhowr Kiilo mitir “KM” u jirta magaalada,waxii kasoo kordhaa kala soco